Sida caadiga ah waxa ay kaaga jawaabeysaa su'aashaada Söderhamn Nära.
Su'aal: Waxaan u guuray cinwaan kale dhamaadkii July, sababtee la igu soo diri karaa biilka bishii August?
Jawaab: Waxaad ka bixineysaa biilka gadaal. Sida caadada ah biilka juli waxaa la bixiyaa Agosti. Waxa ey ku xusun tahay tariikhda warqada biilka.
Su'aal: Waa maxay taariikhda sabab?
Jawaab: Waa taariikhda lacagta loo diro Söderhamn Nära.
Su'aal: Maxaa dhacaya haddii aanan bixinin biilka?
Jawaab: Toban maalmood gudahooda hadii aad ku bixinin biilka waxaa kuu imaaneyo warqad kale oo xasuusin ah oo ku qoran inaad biilka ku bixiso mudo toban casho gudaheeda. Hadii aad ku bixi weyso mudadaas (markaas waxaa kiiskaada loo gudbin doonaa qolada deyn aruurinta) ayaga ayaa kuu soo diri doonto ganaax ah lactii laguugu lahaay iyo lacag kale. Waxaad kale oo halis ugu jirtaa in Söderhamn Nära ay kaa jarto korontada, inter netka,iwm, ilaa aad ka bixiso lacagtaasna ma heli doontid wax koronta ah.
Su'aal: Sidee ayuu u shaqeeyaa autogiroga?
Jawaab: Lacagta waxaa si toos ah looga goosanayaa xisaabtaada bangiga malinta taariikhda ugu dambeyso.
Waxaa muhiim ah in ey ku jirto koontadaada lacag. Hadii laga waayo lacag koontada waxaa laguu cuskanayaa amarka lacag bixinta soo daahday oo laguugu eedeeyey oo ah 60 karoon waxaadna bixineysaa maalinta ugu dambeyso ee bisha soo socoto.
Su'aal: Ma u baahanahay in aan la hadlo Söderhamn Nära hadii aan u guuraayo guri kale?
Jawaab: Haa. Anaga ma ogaan karno in aad guurtay hadii soo sheegin waa in aad bixisaa biilka korontada,inter netka i.w.m.ee gurigii hore.waxaad u ogeysiin kartaa shirkada korontada si fudud waxey ledahay websit, hadii kale waxaad naga wici kartaa adeega macaamiisha ama nagu soo booqo xarun teena ku taalo Stabbläggaregatan 11.
Su'aal: Ma saxiixi karaa hashiiska inter netka hadii aan hesanin sharciga Swidhen?
Jawaab: Maya waad in aad heysataa lambarka amniga bulshada ee iswidhishka ah,oo loo kasaayo (personnummer) oo ay ku jiraan afarta lambar ee ugu dambeyso.
Su'aal: Maxaa la igaaga baahanyahay in aan keeno Söderhamn Nära marka in saxiixayo hashiiska netka?
Jawaab: Sharcigaaga. Kuntaraatka guriga,iyo lambarka guriga. Lambarka guriga waxuu ku qoran yahay xataa furaha guriga. Faxholmen waxey u baahanyihiin lambarkaas markaas wey arki karaan guriga netka la gilinaayo.
Su'aal: Aniga ma saxiixi karaa internet guri aan daganeyn?
Jawaab: Maya, waxaa qasab ah in aad saxiixdo guri aa degen tahay oo kunturaad kiisa adiga ku qoran.
Su'aal: Sidaa ayaan ku hili karaa xariir wireless (Wi-Fi)?
Jawaab: Si aad u hesho WiFi, waxaad u baahan in aad soo iibsato router. Waxaa haboon in aad ka soo iib sato dukaamada lagu gato TVga.
Su'aal: Waa maxay sababta uu u shaqeeyneynin iternetka?
Jawaab: Waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay dhowr waxyaabood.
1. Waxaad aadan bixin biilka oo sidaas daraaddeed loogu dhigay off internetka.
2. Waxaa laga yaabaa in cilad ku timid Boxka netka ama computer.
3. Waxa laga yaabaa inuu jiro qalad ee war geli miishii kuugu dhow ee Soderhamn Nära ama taageerada caawimo, tel. 0270-199 99.
Su'aal: Waa maxay sababta la igu soo diro laba biilka bisha ama faktuuro bil kasta? (Hal faktuura oo Söderhamn Nära iyo faktuurada kale leh ganacsatada korontada ee Gävle)?
Jawaab: Soderhamn NÄRA wax ey leedahay qeyb kamid ah qalabka korontada sidaa daraadeed Lacagta korontada ee Soderhamn Nära leedahay waa qiime go'an oo qof kasta bixiyo. Waxaa kale oo jiro shirkado badan laakiin Söderhamn Nära markasto qeyb ayey ku lahaaneysaa sabata oo ah qalabka ayey leedahay sida fiilada oo kale marka waxaa mar walbo kuu imaanaayo biilka Söderhamn Nära iyo shikada korontada.
Su'aal: Hadii aan ka helo warqad shirkad oo ay iga codsato in aan doorto oo kuturaad korontadeeda la galo (elavtal). Ma qasab miyaa in aan sidaas sameeyo?
Jawaab: Maya, laakiin haddii aadan dooran ikhtiyaari, waxaad si toos ah ugu xiran tahay shay la yiraahdo qiimaha la soo jeediyey.
Doorashadani way ka qaalisan tahay haddii aad doorasho firfircoon ka samayso foomka loo diray.
Sidoo kale ma ka cabsanaysaa inaad heshiiska ku xirto 1, 2 ama 3 sano.
Haddii aad u guurto cinwaan cusub, heshiiska si toos ah ayaa loo joojiyaa.